Cadaadis ku sii kordhaya madaxda ku shirsan Afisyoone iyo wakiilo maanta la kulmay.
June 29, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Muqddisho)-Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa maalintii 2aad ka qabsoomay shirka golaha wadaashiga doorashooyinka, kaas oo uggu dambeyn maanta lagu wado in lasoo gaba gabeeyo, waxaana uu u dhaxeeya Ra’isul Wasaraaha Xukuumadda Federaalka, Madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa shirka looga hadlayaa dejinta qorshaha amniga doorashada, soo gudbinta xubnaha guddiga dibu heshiisiinta gobolka Gedo iyo jadwalka doorashada, oo markii hore uu ahaa in muddo lixdan maalmood oo ka bilaabmaysay 27 May lagu qabto doorashada, balse dhawr iyo sodon maalmood ay tagtay.
Dhanka kalena, madaxda ku shirsan Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa qaabilay wakiillo ka socday haweenka Soomaaliyeed oo ay horkaceysay Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Marwo Xaniifa Xaabsade.
Maddaxda Soomaalida iyo wakiilada haweenka Soomaaliyeed ee ku shiray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka wada hadleen xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ee Goleyaasha Baarlamaanka labada Aqal ee barlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya.